छात्राले आफूसहित अन्य युवतीमाथि शिक्षकले धम्क्याएर पकट पटक बलात्कार गर्ने गरेको खुलाएपछि ...
मङि्सर २०, २०७५ PS
काठमाडौँ : ट्युसन पढाउने बहानामा विद्यार्थीमाथि जबर्जस्ती गर्ने एक शिक्षक पक्राउ परेका छन्।
विगत दुई वर्षदेखि युवतीमाथि पटक पटक बलात्कार गरि धम्क्याउने गरेको उजूरी परेपछि बेलबारी नगरपालिका-८ का २६ वर्षीय सन्तोष गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। युवती प्रहरीमा उजूरी गर्न गएको थाहा पाएपछि फरार भएका गुरुङलाई महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगञ्जको टोलीले मंगलबार बेलबारीबाटै पक्राउ गरि काठमाडौँ ल्याएको हो।
काठमाडौँको कपनमा ट्युसन सेन्टर संचालन गरेका गुरुङले युवतीलाई सुरुमा ललाईफकाई बलात्कार गरेपछि पटक पटक धम्की देखाई जबर्जस्ती गर्ने गरेको रहस्य खुलेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। कपनमा डेरा गरी बस्ने १७ वर्षीया युवतीले बयानको क्रममा आफू पछिल्लो पटक गोंगबुमा बलात्कृत भएको बताउदै गुरुङले ट्युसन पढ्न आउने अन्य युवतीलाई समेत धम्की देखाएर जबर्जस्ति गर्ने गरेको खुलाएकी थिईन।
आरोपित गुरुङलाई राजधानी ल्याएर जबरजस्ती करणी अभियोगमा मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान थालिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक फडिन्द्र प्रसाईंले जानकरी दिए।
प्रकाशित : बिहिबार, मङि्सर २०, २०७५१६:५६
निर्मला हत्या प्रकरण : काठमाडौँबाट पक्राउ परेका प्रदीप रावलद्वारा हत्या स्वीकार ,डीएनए रिपोर्ट आउन बाँकी !
भारतको दिल्लीबाट बुटवल आइरहेको बसले ट्रकलाई ठक्कर दिँदा बस चालकको मृत्यु !
स्वयम्भूमा मोटरसाइकललाई कन्टेनरले ठक्कर दिँदा १ को घटनास्थलमै मृत्यु !
घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका झा सार्वजनिक !
निर्मला पन्त हत्याको छानबिनको प्रतिवेदन संसदमा किन सार्वजनिक गरिएन ?
यातायात क्षेत्रलाई सरकारले अंकुश लगाएको भन्दै व्यवसायीले घोषणा गरे आन्दोलनको कार्यक्रम
ललितपुरमा यौनजन्य हिँसा बढेको बढ्यै ! महिला भन्दा बढी बालिका बलात्कृत हुँदै !